व्यंग्य | गणेश कार्कीको ब्लग
पत्रिकामा आ’को, राष्ट्रपतिले भजन गा’को, लास्टमा सबै मुर्गा भा’को
“अब कान्तिपुरले नै छापिसकेपछि गर्नु प्रशंसा गरियो नि । साला ! मुर्गा पो भइएछ ।” चियापसलमा यस्तै गफ हुँदै थिए । उनी थिइन्, अनुजा बानियाँ । अघिल्लो दिनसम्म कतै नसुनिएको नाम भोलीपल्ट देखि यसरी सुनियो कि अब बिर्षन नै अफ्ठ्यारो छ । त्यतीखेर प्रशंसा गरे पनि अहिले ऐना हेर्दा लाज भए जस्तो लाग्न थालेको छ । हुन पनि हामी कति हतारिएका । हो/होइन मतलब छैन । सुरु गरियो भजन गाउँन । हुन त पत्रिकामा आ’को राष्ट्रपतिसम्मले भजन गा’को अनि हामी के नहतारिनु । बाटामा भेटिएको खाली कागजमा पनि झण्डै लेखियो नि, ‘धन्य अनुजा’ भनेर । लौ हामी त यस्तै भयौं । त्यो कान्तिपुरलाई र राष्ट्रपतिलाई के भाको । अझ अचम्म त त्यतिबेला पो लाग्यो जब
पुर्वप्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि फोन गरेर तारिफ गरे भन्ने सुनियो । ए बाबा यी त प्रधानन्यायाधिश पो भइसकेका मान्छे हुन् त, कुरै नबुझी फोन गर्न भ्याएछन् तिनले पनि । जागिर छोडेको एक महिना भएको छैन, सबै कुरा बिर्षीए जस्तो नि ।
तेत्रो तारिफ कुकुरको कोनिकेमा नै गयो नि । अहिले पो जति सम्झ्यो, उति होइन जस्तो लाग्छ । एक दिन निस्कदा पत्रिकामा अर्कैको फोटो अनि फेरि अर्को दिन अर्कैको फोटो रै’छ । त्यै पनि थाहा पाइएन । कहिले पौडेल रे, कहिले पोखरेल रे । त्यै पनि हो कि भनियो ।
अब धेरै के कुरा गर्नु । लास्टमा त्यै हो मुर्गा भइयो गतिलै । अहिले त रिस पो उठिराखेको छ । लगेर जेलमा कोचिदिए पनि हुने । तर पुलिसलाई कसैले उजुरी दे’को छैन रे । उजुरी बिना केहि गर्न मिल्दैन हजुर भन्छन् । अपराधीलाई कारवाही गर्न पनि उजुरी चाहिने ? कही नभएका अल्छि मोराहरु ।
अब हामी बरा त सँधै मुर्गा भएकै हौ । सहेकै हौ । यो पनि सहन्छौ । ए ! राष्ट्रपतिज्यू तपाई चै हाल्नुहोस हओ उजुरी !
Filed under: व्यंग्य, समाचार विश्लेषण |	5 Comments »
गर्मीमा पग्लिँदा वैँशहरु
Posted on April 23, 2011 by नेपाली मुटु
वैँशको उकालो चढ्दै गएका युवतीहरुलाई चैतमासमा पोइल जाऊँ–जाऊँ लाग्छ रे । यो भनाइले केटीहरुलाई मात्र छुँदैन । केटी पोइल जानु वा केटी केटासँग भाग्नु/लाग्नु भनेको केटाले केटीलाई भगाउनु पनि हो । अर्थात् चैतमासको फुङरुङ्ग र उखरमाउलो परिवेशमा वैँशको रन्को केटीहरुलाई मात्र चढ्दैन, केटाहरुलाई पनि चढ्छ । काठमाडौँका सडकमा यो चैतमासको वाफमा वैँशका प्रदर्शनी भइरहेका छन् । कुनै औपचारिक समारोह छैन, न औपचारिक निम्तो नै । न समयको पावन्दी छ, न दृश्यावलोकनमा रोकतोक नै । तातो छल्न भन्दै केटीहरु कपडाको साइज घटाउँदै छन्, यता विचरा केटाहरु दोहोरो तापको मारमा छन्–प्रकृतिको खुला तातो र वैँशको बन्द तातो !
चैतमासका सडकका वैँशालु प्रदर्शनले दूर्घटनाको सम्भावना बढाएका छन् । सडकमा हिड्दा वा गुड्दा व्यस्त बाटोमा चनाखो हुनुपर्ने आँखा र सन्तुलित हुनुपर्ने मन अन्यत्र दृश्यतिर लोभिएपछि दूर्घटना बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । किन लोभिनु त यस्ता दृश्यमा भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जवाफ त्यति अप्राकृतिक छैन, लड्डुतिर नलोभिने को छ र ?
केटाहरुले जिस्काए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् सायद केटीहरु । नत्र शरीरका झ्याल ढोका यति विघ्न किन खुल्दा हुन् ? फेरि उनीहरु नै हुन्, केटाहरुले जिस्काउँदा रिसाउने र बाइस–सत्तरी नखरा पार्ने । यस्तो नखरा बुझिनसक्नुको छ । केटाहरु उस्तै धर्मात्मा ! केटीहरुको जिस्किने चाहना पूरा गरिहाल्ने– जिब्रो पड्काएर, सुसेलेर वा आँखा सन्काएर ।
शरीरका भित्री पाटपूर्जाहरुको शतप्रतिशत अवस्थिति झल्काउने खालका कपडामा केटीहरु सजिँदा केटाहरुमा पसिना कम र ¥याल बढी आउँछ । आधुनिकता र स्वतन्त्रता पर्याय बनेका छन्, खास फेसनको मामलामा । नौनीजस्ता भित्री कोमल अङ्ग स्वतन्त्र छाड्ने आधुनिक केटीहरुको पारा देख्दा भने केटाहरुमा पसिना बढी आउन थाल्छ, चिटचिट !
केटाहरुका आँखाहरु पनि त्यस्तै, कहाँकहाँ हेर्न भ्याउँछन् । हेराइ पनि कति चुस्त र दूरुस्त ! माथि कपालदेखि तल कुर्कुच्चासम्मको वृहत अवलोकन गर्ने काम क्षणभरमै पूरा हुन्छ । केटाहरु कपाल, आँखा, ओठ, छाती, पेट, कम्मर, हिप, खुट्टा आदि हेर्ने काम मात्र गर्दैनन्, आफ्नो ‘गच्छेअनुसार’ तिनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने काम पनि गर्छन् ।
कतिको जीउ साँच्चै लोभलाग्दो हुन्छ; सडकमा देखाउँदै हिड्नु ठीक होला÷नहोला, देखाउन लायक हुन्छ । कतिपयको भने छातीभन्दा पेट ठूलो हुन्छ र उसैले लाएको हुन्छ नाइटोको खाल्डोसमेत देखिने टाइट लुगा । ठिटीहरुमा ‘एमटिभी’ र ‘जुम’को असर देखिन्छ भने भाउज्यू–आण्टीहरुमा ‘स्टार–प्लस’ र ‘जिटिभी’का सिरियलको भूत सवार छ ।
मःमः खाँदाको पच्चीस मिनेटमा पंक्तिकारले गरेको अनुसन्धानको नतिजा के छ भने, मःमःको डल्ला मुखमा हाल्न प्लेटतिर झुक्दा अगाडि आउने कपाल तह लगाउन केटीहरु हरेक मिनेटको चौथाइ समय दिन्छन् । मःमःको एक डल्ला चपाञ्जेल थुप्रै पटक कपाल मिलाउने काम हुन्छ । मःमः घिच्ने बेला त कपाल बाँध्नु नि,कही नभएका कपाल !
अनुसन्धानको अर्को फाइण्डिङ के पनि छ भने, कतिपय छिल्लिएका केटीहरु उभिँदा छातीमुनी हात बाँधेर यसरी उभिन्छन् ता कि उनीहरुको छातीको आयतन ज्यादा देखियोस् । केटीहरुको छाती केटाहरुका लागि भूकम्पको केन्द्र हो भन्ने जान्दाजान्दै, केटीहरु भूकम्पको रेक्टर स्केल बढाउन किन अतिरिक्त प्रयास गर्छन्, सोचनीय विषय छ ।
आजभोलिका मैयाहरुको हाँस्ने शैली विचित्रको छ । आधुनिक र सभ्य भनाउँदा युवतीहरु दाँत च्यापेर ओठ च्याती हाँस्छन्, हाँसो हो कि खिसी हो थाहा नहुने गरी । प्राइभेट ठाउँमा त ठीकै छ; सार्वजनिक स्थलमा समेत धेरै सङ्ख्यामा महिलाहरु जम्मा हुँदा आँखा चिम्लेर यसरी हाँस्छन् कि छेवैका अरुहरु हाँसेर रिसाउन भ्याइसकेका हुन्छन् !
प्रकृतिले बनाएको नारीपुरुष सम्बन्ध र आकर्षणको नियम विशिष्टको छ । यही नियमको कृपा हो कि आज सृष्टि गतिशील र सन्तुलित छ । अतः विद्यमान नारीपुरुष आकर्षणलाई गलत अथ्र्याउनु हुँदैन । तर आकर्षणको सृजना र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हुने हरकतहरु मर्यादित हुनुपर्छ । मर्यादा समाजका मान्यता र राष्ट्रका कानुनसापेक्ष हुन्छन् ।
कुन चाहिँ युवतीको चाहना र प्रयास नहोला कि उप्रति सबैको ध्यानाकर्षण होस् । तर ध्यान तान्नैका लागि मर्यादा, शोभा र चरित्रको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । यसबारे युवाहरु पनि सचेत र सफा हुनुपर्छ । फेरि पनि; देखाएपछि हेर्नेको गल्ती नमानिएला, पस्केपछि खानेको बाध्यता होला । मर्यादाका लागि युवतीहरु नै जिम्मेवार भएको राम्रो !
Filed under: व्यंग्य, साप्ताहिक साहित्य |	14 Comments »